Waa maxay Adeegyada Daryeelka Carruurta? - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Waa maxay Adeegyada Daryeelka Carruurta?
Ilamahaagu ma kala kulmaa dhibaato guriga, ama ma waxa aad tahay qof wayn oo ka walaacsan wax ku saabsan ilma yar ama qof dhalin yaro ah? Adeega Daryeelka Carruurta waxa uu siiyaa carruurta, dadka dhalinta yar iyo qoysaska caawimo iyo taageero marka ay la kulmayaan dhibaatooyin xaga guriga ah, marka ilmahu aany helayn daryeelka uu u baahanyahay ama u baahanyahay caawimida sababo kale awgood.
Adeeg Daryeelka Carruurta waxaa loo xilsaaray bixinta caawimada marka dadka ka yar 18 sano jir ay ku dhib muteen ama ay halis ugu jiraan inay dhib ka soo gaadho dagaal ama weerar, gudniinka goynta xubinta taranka haweenka, guurka khasabka ah ama hanjabaada la midka ah. Tusaalooyinka kale ee xaaladaha kuwaasoo Adeegyada Daryeelka Carruurtu ay caawin kartaa waa haddii waalidku ay isticmaalaan maandooriye ama khamri ama marka ilmahu uu leeyahay dhibaatooyin dhaqanka ah oo halis ah ama dhibaatooyinka la xidhiidha falka dembiga ama si xun u isticmaalka maandooriyaha/khamriga. Caawimadu waa bilaash.
Tallaabooyinka caawimada lagu jiheeyay guriga waxay noqon karaan:
talada iyo hagitaanka qoyska
taageerada dhaqaale ee goobta dugsiga barbaarinta
taageerada dhaqaale ee daryeelka ka baxsan dugsiga ee carruurta dugsiga (SFO/AKS)
taageerada dhaqaale ee hawlaha firaaqada ama hawlaha kale
taageerada maalka ee dhammaadka todobaadyada ama booqashada guriga.
"Danta ugu wanaagsan ilmaha" waa furaha shaqada Adeegyada Daryeelka Carruurta (barbardhig. Qaybta 4-1 ee Xeerka Daryeelka Carruurta – Go’aansashada danaha ugu fiican ee ilmaha). Wakhtiyada qaarkood tani waxay khilaafi kartaa rabitaanada waalidka. Adeega Daryeelka Carruurta waxa uu caawin doonaa oo taageeri doonaa waalidka si uu awood ugu siiyo iyaga inay u daryeelaan carruurtooda si sax ah, oo carruurtoodu waxay ku noolaan doonaan xaga guriga, haddii ay suuragaltahay.
Dhowr xaaladood oo halis ah maaha danta ugu wanaagsan ee ilmaha inuu ku noolaado xaga guriga, oo Adeega Daryeelka Carruurtu waxaa inuu qaadaa masuuliyada daryeelka ilmaha. Tani waxay dhici doontaa oggolaanasha ama la’aanta oggolaanshaha qoyska. Keliya guddida degmada, oo ah sidii guddi maxkamadeed, ayaa samayn karta go’aamada ku saabsan u qaadista carruurta daryeelka marka ay ku lid tahay rabitaanka waalidkooda.
Adeega Daryeelka Carruurta waxa uu caawin doonaa oo taageeri doonaa waalidka si uu awood ugu siiyo iyaga inay u daryeelaan carruurtooda si sax ah
Badanka shaqaalaha Adeega Daryeelka waxa uu ku tiirsanyahay dadka iyaga ku wargelinaya walaacyada ay qabaan ee ku saabsan ilmaha, markaas ilmaha qoyskiisu waxay heli karaan caawimada ay u baahanyihiin. Haddii aad tahay shakhsi gaar ah ama aad la shaqayso carruurta iyo dadka dhalinyarada ah, waxaad leedahay waajib sharci ah oo aad kaga warbixiso walaac kasta oo aad qabto.
Badanka shaqaalaha Adeega Daryeelka Carruurta waa mid uun saraakiisha daryeelka carruurta, shaqaalaha bulshadda, sharci yaqaanada ama dhakhtarada nafsiga. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Adeega Daryeelka Carruurtu waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Dhammaan degmooyinka gudaha Norway waxay bixiyaan adeega daryeelka carruurta. Dowladdo hoose oo badan sidoo kale waxay bixiyaan xarunta gurmadka daryeelka carruurta. Websaydka barnevernvakten.no waxa ka mid ahliiska degmada ee xarumaha adeegyada daryeelka carruurta iyo gurmadka,siiba macluumaad kale oo faa’iido leh
> HAAYADA MAADINTA CARRURTA. Sida carrurta u fiican
Liiska adeegyada daryeelka carruurta iyo xarumaha gurmadka daryeelka carruurta
Websaydka Guddida Maamulka Carruurta Norway, Dhalinyrada iyo Arrimaha Qoyska